Lolu hlobo isigayo angakhiqiza round ipayipi, ipayipi isikwele elingunxande futhi ezinye abroach abandayo iphuma esigabeni steel
1) ZTF Owenza Kusetshenziswa Ubuchwepheshe Ngo Ukukhiqiza Round Pipe
2) Ngokuqondile Square Owenza Technology Ngo Ukukhiqiza Square & kukanxande Pipe
3) Khiqiza Izingxenye Of Abroach Cold asongwe Isigaba Steel
1) ZTF Owenza Technology Isetshenziswa Ngo Produc ing Round Pipe
√ Akudingeki ukushintsha isikhunta e ukuwohloka kwesigaba, ukulondoloza ngu-60% yezindleko phezu ezinamasondo
√ Roller ekushintsheni isikhathi uyanqunywa kakhulu, ukubhidlika kwesigaba ayidingi ukushintsha isikhunta futhi nje ulungise kulungile. Futhi kungaba usike phansi esikhiqiza isikhathi.
√ Khipha zabasebenzi umfutho.
√ Roll ukwakha ubuchwepheshe, ubukhulu ihlukile futhi propitious ngoba X70, N80 steel strip.
√ I strip steel siphazamisekile futhi beared ngaphezulu okunengqondo, ukunciphisa deda phakathi strip kanye roller, futhi kuncishiswe imfucuza roller.
√ Kulula ukubuyisela futhi ulungise roller.
2) Ngokuqondile Square Owenza Techn ology Ngo Produc ing Square & kukanxande Pipe
√ Qhathanisa nge round ku isikwele isikwele indlela obumba, ngale ndlela kungcono ngoba ukuma emaphethelweni kwesigaba cross, elithe, semi ububanzi arc bangaphakathi Small, futhi phama uyisicaba, isimo sibonakala njalo.
√ wonke umugqa umthwalo uphansi, ikakhulu ezingxenyeni Sizing.
√ Ububanzi steel strip incane mayelana 2.4-3% kunanoma round ku isikwele isikwele, kungaba ugcine kudle impahla eluhlaza.
√ It yenza multi-iphuzu eguqa indlela, ugweme amandla Axial futhi ohlangothini nemihuzuko, ukunciphisa isinyathelo ukwakha ngenkathi ukuqinisekisa ikhwalithi, Okwamanje ke ukwehlisa ukuchithwa amandla roller nemihuzuko.
√ It yenza kuhlanganiswe uhlobo roller phezu iningi zezitsha, ke uyaqaphela ukuthi umuntu iqoqo roller angakhiqiza inqwaba isikwele isikwele ipayipi nge sebhithi ehlukile, wehlise esitolo of roller, ongaphakeme izindleko mayelana 80% ku-roller, osheshayo le bankroll inzuzo, short isikhathi omunye umklamo omusha umkhiqizo.
abroach Simple abandayo iphuma esigabeni steel ezifana ezakhiwa ngokuqondile isiteshi steel, C steel okwenyanga, Z ezimise steel.
Previous: Abroach Cold asongwe Isigaba Steel Production Line
Okulandelayo: esinejubane Pipe Mill
Tube okuzenzakalelayo zokushisela Machine
Okuzenzakalelayo ashiselwe Steel Pipe
Roll Cold Owenza Machine For ashiselwe Pipe
Imvamisa ashiselwe Pipe Line
High Frequency Pipe zokushisela Machine
Pipe zokushisela Ukwenza Machine
Engagqwali Pipe Production Li ne
Steel Pipe zokushisela Line
Steel Inqawe Ukwenza Machine
Weld Pipe Roll Owenza Machine
ashiselwe Pipe Izinsiza kusebenza
ashiselwe Pipe Production Line
Welding Machine Owenza
Welding Pipe Ukwenza Machine